Anodzivirira zvipfeko seti → Kushanda mbatya • P & M embroidery yekombuta
Zvipfeko zvekudzivirira zvakagadzirirwa kuchengetedza kuchengetedzwa panguva yebasa. Izvo zvakare zvinodikanwa zvemitemo yehutano nekuchengetedza. Iko kushandiswa kwemidziyo kugadzira muunganidzwa wakadai kunoda machira akasarudzika nekuda kwavo chaiwo mamiriro ekushandisa.
Mukupa kwechitoro chedu, sechikamu chekupfeka chinodzivirira, unogona kutenga anodzivirira masks, ngowani, zvipfeko zvine acid-chiratidzo (chevanhu vanoshanda nemakemikari akasimba) uye mbatya dzevacheki vematanda (bhurugwa nemasikisi).
Kutenda nekushandiswa kwemhando yepamusoro zvigadzirwa, zvipfeko zvekudzivirira zvinopesana nekukuvara, zvinokuvadza zvezvinhu zvine chekuita nebasa rakaitwa, uye zvakare zvinopesana zvakanyanya nekuchenesa kana kuwacha kazhinji. Kiti dzekudzivirira dzinoitwa nezvinhu zvakagadzirirwa kushandiswa kwavo, zvese kuitira kuchengetedzwa kwemushandisi. Hupamhi mukana wekugadzirisa zvipfeko unovimbisa kuti ichave yakakodzera mhando zhinji dzehuwandu uye nevanhu vehurefu hwakasiyana.
Zvipfeko zvekudzivirira kuchengetedza uye kunyaradza kwebasa
Hembe dzakagadzirwa nePVC (acid-inodzivirira) machira anopokana nemakemikari. Iyo inoitirwa kuti ishandiswe munzvimbo dzinowanikwa mukana wekubata nezvinhu zvakaita seasidhi, mabheseni uye mahydroxide. Zvipfeko zvekudzivirira zvinopihwa muchitoro chedu zvinosangana nezvinodiwa zveEN13688, EN14605. Hembe dzekudzivirira dzinosanganisirawo mbatya dzecheni yekuzvidzivirira kubva kukuvara kwecheni (tirauzi). Chipfeko chine bhachi nemudhebhe zvine zvakawanda zvekuchengetedza mwero wepamusoro wekuchengetedza. Iyo seti inokurudzirwa kune vanocheka huni kana vanoshandisa chainsaw - inosangana nezvinodiwa zveEN13688 uye EN381-5 (class 2 (trousers)).
Yedu assortment inosanganisira yazvino zvipfeko zvekuzvidzivirira zvakagadzirwa nehuremu hunorema nemusanganiswa wezvigadzirwa zvekugadzira. Iko kusarongeka kwebasa mumabasa mazhinji uye mamiriro ekuita kwavo kwaireva kuti mamodheru atinopa anotarisa izvi zvinodiwa, kugadzirisa izvo parameter kune izvo zvido zvemunhu akasarudzika.
Nyanzvi yekuchengetedza zvipfeko inogadzirwa nezvinhu zvakawanda zvinofambisa kushandiswa kwavo. Kuti uwane nyaradzo, vakave nehombodo dzakakura, zipi kuti vafambise kupfeka trousers, uye yakasimbiswa seams yekudzivirira kubva kumakaniki, makemikari uye mamiriro ekunze.
Usati watenga kubva kune yedu shopu tinokurudzira kubata nesu kuti tivimbise kuwanikwa kwezvigadzirwa nemugadziri wedu. Vashandi vedu vanga vauinaro kuti uwane mazano pamusoro pesarudzo yezvokupfeka.
beta zvipfeko zvekudziviriramafirimu ekudzivirira ehembezvipfeko zvinodzivirirwazvipfeko zvekudzivirira zvekurapazvivharo zvekudzivirira zvehembedzivirirozvipfeko zvekudzivirirazvipfeko zvekudzivirira zvevanazvipfeko zvekudzivirira zvemagetsizvipfeko zvekudzivirira zvechirembazvipfeko zvekudzivirira zvemagetsizvipfeko zvekudzivirira zvevechirembamatura edzivirirozvipfeko zvekudzivirira zvekumwayahusqvarna zvipfeko zvekudzivirirazvipfeko zvinodzivirirwambatya dzekudzivirira kubva ku kielcezvipfeko zvekudzivirira zvekurapazvipfeko zvekudzivirira zvechibhokisiPPE zvipfeko zvekudzivirirazvipfeko zvekudzivirira zvemotochengetedza zvipfeko zvinodzivirirafire brigade zvipfeko zvekudziviriranguo dzinodzivirira dhipatimendi remotonguo dzekudziviriramabhegi ekudzivirira ehembe